Global Aawaj | दशकदेखि आँगनको धारा सुख्खा, पानीकै लागि घण्टौंको पैदल यात्रा दशकदेखि आँगनको धारा सुख्खा, पानीकै लागि घण्टौंको पैदल यात्रा
दशकदेखि आँगनको धारा सुख्खा, पानीकै लागि घण्टौंको पैदल यात्रा
चुनावमा मुख्य नारानै खानेपानी
बुटवल । गाउँमा बाटो बनेपछि घर अगाडिको बाटोहुँदै बस गुड्ने भएपछि मख्ख थिए, तत्कालिन अर्घाखाँचीको जुकेना गाविस–८ र ९ का स्थानीय । गोरुसिंगे सन्धिखर्क सडक खण्ड अन्तरगत अमराईबाट १४ किलोमिटर उत्तरमा रहेको साविक जुकेनाको शिवादहसम्म मोटर गुड्ने भएपछि बाजागाजासहित भव्य उत्सवनै मनाइयो । वि.स. २०६५ सालमा गाउँमा बनेको मोटरबाटो हुँदै बस पुगेपछि गाउँलेहरुले तामझामका साथ स्वागत गरे । त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले प्रमुख अतिथि भएर गाउँमा आएको बसलाई स्वागत गर्दै रिबन काटे ।
मोटरलाई स्वागत गर्न रिबन काटेर खुसी मनाइरहँदा घर अगाडि चुहिने धाराका पाइप लाइन पनिसंगै काटिएका थिए । मोटर बाटो बनाउने क्रममा गाउँसम्म पुग्ने पानीका पाइपहरु छिन्नभिन्न हुने गरी काटिएपछि घर अघिको धारा सुख्खा हुने नै भयो । गाउँमा यसरी एक आवश्यकता पूरा गर्दा अर्को आवश्यकताको पूर्वाधरमा असर गरे पनि छिट्टै मर्मत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दशक वित्दा पनि रिवनसँगै काटिएका पानीमा धाराहरु सुख्खा नै रहे ।
दुन्धुरे खानेपानी आयोजनाको खासगरी जुकेनादेखि शिवादहसम्मको पाइप पूर्णरुपमा नै छेतविक्षेत भए । दुन्धुरे पानी लगभग साविक जुकेना गा.वि.स. सबै र जलुके गा.वि.स.का केहीस्थानीयले २०६२ देखि २०६४ सालसम्म उपभोग गरेका थिए । त्यसपछि अन्य वैकल्पिक खानेपानीको स्रोत नभएका क्षेत्रहरु लामो समयदेखि मारमा परेका छन् । यो आयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न नहुदाँ यहाँका बासिन्दा पीउने पानीका लागि घण्टौको पैदल यात्रा गरेर गाग्रोमा बोक्नु पर्ने अवस्था छ । यद्यपी कालिमाटी, गल्दा, सानादह लगायतका स्थानीयले भने अहिले पनि दुन्धुरे खानेपानी उपभोग गर्दै आएका छन् ।
खानेपानी आयोजनाको लागि भन्दै वर्षेनी लाखौँ बजेट आएपनि एक दशक बढी समय बितिसक्दा पनि मर्मतको काम नहुँदा जनता मारमा परेका छन् । धेरै जसो खानेपानीका ट्याङकी र धाराहरु जिर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
घण्टौ लगाएर पानी लिन जान बाध्य छन् स्थानीय
सितगंगा नगरपालिका–६ (साविक जुकेना गा.वि.स.वडा नम्बर ९) टावर टोल निवासी पार्वता आचार्य बिहान ४ बजे उठछिन् । उठ्ने वित्तिकै उनलाई चिन्ता एउटै कुराको हुन्छ, अब कसरी पानी ल्याउने । घरबाट करिब ४५ मिनेट लाग्छ उनलाई, पानी लिन ठूला पँधेरामा जान ।
उनको घर नजिकै दुन्धुरे खानेपानी आयोजनाको ठूलै ट्याङ्की छ । जुन एकदमै जिर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ ।उक्त ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गर्न पाए आफूहरुलाई धेरै सजिलो हुने उनी बताउँछिन् । खानेपानीका लागि समस्या भएको भन्दैआफूहरुले वडाध्यक्ष र नगर प्रमुखलाई पटक–पटक गुनासो राख्दा पनि माग सम्बोन्धन नगरेको उनको गुनासो छ ।
यस्तै टावर टोलकी बेल कुमारी भट्टराई पनि विहानको झिसमिसेमै गाग्रो बोकेर पँधेरो धाउछिन् । उनलाई विहानको पाँच नबज्दै कसरी पँधेरो पुगेर पानी ल्याउने र हतार–हतार भान्छाका काममा लाग्नु पर्ने चिन्ताले पिरोल्छ। उनको घर नजिकै रहेको ठूलो पानी ट्याङ्की र धाराले प्यास मेटाउन छाडेको दशक बढी भयो । ‘पानी आए मात्रै पनि हामीलाई धेरै सजिलो हुने थियो ।’ उनी भन्छिन्‘टावर टोलका स्थानीय त पानी नपाएर काकाकुल नै हुने भयौं ।’ चुनाबमा सबै गर्छौ भनेर आश्वासन दिएका नेता चुनाव जितेपछि एक पटक पनि जनताका समस्या बुझन नआएको भन्दै उनले गुनासो गरिन् ।
यस्तो गुनासो गर्ने टावर टोलका स्थानीय मात्रै छैनन् । फुर्सामाटा, खमारी, देउराली, कलमकोट, दाङसिङ्ग,शिवादह, कैवाङ्ग र जुवाकोट लगायतका स्थानीयको व्यथा उस्तै छ ।
दशक बढीदेखि सुख्खा बनेका धारामा अझै पानी चुहीएन
वि.स. २०४६/४७ सालबाट सुरु भएको खानेपानी आयोजना २०५३/५४ सालमा सम्पन्न भएको थियो । पोखरी, डाँडापारी लगाएतका १५० घर धुरीले पहिलो पटक सार्वजनिक धारोबाट दुन्धुरे खानेपानी उपभोग गरेका थिए । सुरुमा सानो आयोजनाको रुपबाट सुरु भएको दुन्धुरे खानेपानी आयोजनामा सिरनेरी मूलको पानीलाई समावेश गरी साविक जुकेना गा.वि.स. र जलुकेको गा.वि.स.का केही क्षेत्रमा समेत खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो ।
यस्तै २०५५ मा आयोजनालाई विस्तार गरी गल्दा, करापु, दाङसिङग हुँदै जलुके गा.वि.स. वडा नम्बर १ का केही स्थानीय गरी २५० घरधुरीले खानेपानी पानी उपभोग गरेको थिए ।वि.स. २०६२ सालमा विस्तार हुदैँ यो आयोजनाको पानी फुर्सामाटा, देउराली, कलमकोट, दाङसिङ्ग, शिवादह, कैवाङ्ग र जलुकेको जुवाकोटसम्म पुगेको थियो । वि.स. २०६२ देखि २०६४ सालसम्म साविक जुकेनाका धेरै स्थानीयले दुन्धुरेको पानी उपभोग गरेका थिए । तर, २०६४ सालदेखि यता सो क्षेत्रका स्थानीय यो खानेपानी उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।
दुन्धुरे खानेपानी आयोजना बजेट अभाबका कारण भने मर्मत बिलम्ब भएको होइन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र स्थानीय उपभोक्ता समितीको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण लामो समयसम्म योजना सम्पन्न हुन नसेको हो । साथै अनुगमन गर्ने सम्बन्धीत निकायले लामो समयसम्म योजना के–कति कारणले पुरा भएको छैन भनेर अध्ययन नगर्नु पनि गम्भीर लापरवाही हो ।
दुन्धुरे खानेपानीको मर्मतका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सालसम्म नियमित रुपमा बजेट दिइदै आएको थियो । त्यसपछि भने केन्द्र सरकारले सो खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छैन् ।लामो सयमसम्म पनि काम सम्पन्न नभएको र लाखाँै बजेट खर्च भएकाले सरकारले बजेट रोकेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुन्धुरे खानेपानीका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाल्पा, साइट अर्घाखाँचीका इन्जिनियर राम भरोष यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशबाट ७० लाख बजेट आएको थियो । जसमध्ये ३८ लाख ४४ हजार २३६ रुपैँया बजेट खर्च भएको थियो भने बाँकी रकम फ्रिज भएको थियो । यस्तै २०७६/७७ मा ७० लाख बजेट आएकोमा आपसी विबादका कारणले कुनै पनि काम नभएर सबै बजेट फ्रिज भएकोे थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९१ लाख ८८ हजार बजेट आएकामा ८६ लाख ४८ हजार ६४० खर्च भएको थियो भने ४ लाख ६० हजार १८५ रुपैँया फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष ७८/७९ का लागि भने अझै बजेट सिलिङ्ग नभएर नआएको यादवले बताए ।
चुवानी नारामै सिमित
बि.स.२०७० साल र २०७४ सालको निर्वाचनामा सबैले त्यस क्षेत्रमा खानेपानी ल्याइदिने चुनाबी नारा नै बनाए । २०७० को दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार डा. दुमन सिंह थापा, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुषाल र माओवादी केन्द्रका विष्णुहरि शर्माले चुनाव अघि खानेपानी ल्याउने आश्वासन दिए ।
चुनावमा एमालेका डा. थापाले जिते तर चुनाव जिते पछि सबै चुनावमा गरेका बाचा भुले । यस्तै २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा पनि त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सोही आश्वासन दिए राजनीतिक दलका नेताहरुले ।
संघको चुनाबमा तत्कालिन बाम गठबन्धनका उम्मेदवार टोप बहादुर रायमाझीले जिते भने प्रदेशमा पनि बाम गठबन्धनकै रामजी घिमिरेले जिते । तर, स्थानीय तहको प्रमुखमा नेपाली कांगेसका सुर्यप्रसाद अधिकारीले जिते । चुनाब जिते पछि सबैले आफूले निर्वाचनका बेला स्थानीयसँग गरेका आवश्वास पुरा गरेनन् । प्रतिनिधीसभाका संदस्य टोप बहादुर रायमाझी निर्वाचित (हाल पदमुक्त) भए पछि एक पटक पनि गाउँमा गएनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उर्जा मन्त्री हुदाँ नौमुरे जलविद्युतको उद्घाटन गर्न रायमाझी त्यहीबाटो हुँदै मात्रै गएका थिए । तर, गाउँ घरका समस्या बुझ्नका लागि भने एक पटक पनि फर्केर नआएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
५० प्रतिशत काम सम्पन्न
दुन्धुरे खानेपानी आयोजनाको काम अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाल्पा, साइट अर्घाखाँचीका इन्जिनियर रामभरोष यादवले बताए । गतवर्ष विबादका कारण काम रोकिँदा धेरै काम हुन नसेको यादवले बताए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा योजना सम्पन्न गर्ने गरी काम तयारी भएको इन्जिनियर थापाले बताए ।
यस्तै दुन्धुरे खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष गोबिन्द्र पौडेलले आफू अध्यक्ष बने पछि कामले तीव्रता पाएको दाबी गरे । विभिन्न विबादका कारण रोकिएका कामलाई विबाद हल गरि काम सुचारु गरेको दाबी गरे । अझै केही स्थानमा पाइप लाइन र ट्याङ्की बनाउन बाँकी रहेको र यी काम सम्पन्न भएपछि सबै घरमा धारा बनाउने काम सुरु गर्ने बताए ।
शिवादह लगायत केही स्थानमा सर्वे नभएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । आफूले सर्वे हुनु पर्ने क्षेत्रमा नभएको भन्दै खानेपानी कार्यालयमा निवेदन दिएको र सो क्षेत्रका पनि सर्वे गरेर छिट्टै काम सुरु गर्ने बताए । यता खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शिव कुमार श्रेष्ठले सर्वे भूलबस छुटेको बताए ।
छिट्टै केही व्यवस्था हुन्छ: नगर प्रमुख अधिकारी
सितगंगा नगरपालिका मेयर सूर्य प्रसाद अधिकारीले छिट्टै जसरी भए पनि केही विकल्प खोज्ने बताए । ‘अहिले खास वडा नम्बर–६ को टावर टोलमा धेरै नै खानेपानीको लागि समस्या रहेको छ ।’ ग्लोबल आवाजसँग कुराकानी गर्दै नगरप्रमुख अधिकारीले भने‘ अल्पकालीन योजनाका माध्यमबाट भए पनि त्यहाँ पानिको व्यवस्था गर्न तयारी भइरहेको छ ।’
टावर टोलका लागि खानेपानीको व्यस्था गर्नका लागि नगर आफैले १० लाख बजेट छुट्टाएको बताए । तर,टावर टोल धेरै डाँडोमा भएका कारण मोटर लगाएर पनि पानी तान्न नसकिएको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । साथै उनले दुन्धुरे खानेपानी आयोजना प्रदेश मातहतमा रहेको र स्थानीय तहमा अधिकार नभएकाले समस्या भएको बताए । नगरभित्र खानेपानीको समस्या भएका क्षेत्रमा अल्पकालिन योजनाबाट पानी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
आयोजना सम्पन्नको वर्ष भित्रै अलपत्रः आँगनमा धारा, पानी लिन आधा घण्टा हिड्नुपर्ने